U-Guangdong Qianjin ugcina imali ekwakheni iprojekthi yemveliso ebandayo eqengqelekileyo engamakhulu amabini amawaka ngonyaka e-Shizong, Yunnan - China Foshan Hermes Steel
U-Guangdong Qianjin ugcina imali ekwakhiweni kweprojekti yokuqengqeleka ebandayo engama-200,000 / ngonyaka ehlala eShizong, eYunnan
Kwiminyaka yakutshanje, iShizong County ilandele umbono "wokuzalisa ikhonkco, ukwandisa ikhonkco, kunye nokomeleza ikhonkco", ngokuxhomekeka kwi-1.575 yezigidi zeetoni zesinyithi esingenasici semveliso yentsimbi ekrwada. intsimbi mveliso chain, kwaye bazama ukwakha insimbi mveliso cluster, kwaye bazama ukwenza Shizong The County Stainless Steel Industrial Park sele yakhiwe kwisixeko sokuqala kuphela steel stainless of Yunnan kumzantsi-ntshona.
Ngokwesi sicwangciso, iShizong County Stainless Steel Industrial Park inendawo ecwangcisiweyo yomhlaba weehektare ezingama-279.76 kunye noqikelelo lotyalo-mali olupheleleyo lwe-7.81 yezigidigidi ze-yuan. Kuqikelelwa ukuba ngo-2025, iyakufezekisa ingeniso yentengiso ye-62.8 yezigidigidi ze-yuan, iyonke inzuzo eyi-1.81 yezigidigidi ze-yuan, kunye nerhafu iyonke eyi-1.26 yezigidigidi ze-yuan. Kucetyelwe ukuthatha iminyaka emi-3 ukuya kwemi-5 ukwakha iShizong County Stainless Steel Industrial Park ibe yinguqulelo ephuculweyo kuyo yonke imixokelelwano yemizi-mveliso esukela kwizixhobo eziluhlaza, ukunyibilika, ukuqengqeleka okushushu, ukuqengqeleka kokubandayo, kunye nokuveliswa kweemveliso ezahlukeneyo zentsimbi. inqwelomoya yenqwelomoya yenqanaba lezinto ezingenasici
Umzi-mveliso wentsimbi engenasici waqalisa ngeYunnan Tiangao Nickel Industry Co., Ltd., eyatsala utyalomali ngo-2009. Imveliso yokunyibilikisa intsimbi engenasici yagqitywa kwaye yaqala ukusebenza ngo-Agasti ka-2012. Ngokuhamba kwexesha, ishishini elinye kunye nesithintelo esingafezekanga seshishini. uphuhliso kunye nokukhula kwishishini lensimbi yeShizong.
Ukuze kunikwe umdlalo opheleleyo kwizibonelelo ezizodwa zeetoni ezizizigidi eziyi-1.575 zesinyithi esingenasici semveliso yentsimbi ekrwada, iShizong County yazisa iQujing Dachang Trading Co., Ltd., iChongqing Cuizhiyuan Enterprise Management Co., Ltd. kunye neShizong County Fangwei Investment kunye noPhuhliso Co., Ltd. ngokukhuthaza utyalo-mali. I-Shizong County Wolaidi Metal Materials Co., Ltd., enotyalo-mali olupheleleyo lwe-870 yezigidi ze-yuan, iya kwakha i-1.4 yezigidi zeetoni zemveliso yokuqengqeleka eshushu ye-1780mm kunye neetoni ezingama-300,000 ze-1450mm ye-thermal annealing kunye ne-pickling production line. Iprojekthi iqale ukwakhiwa nge-29 kaMay, 2018 kwaye izakugqitywa ngo-2019. Iprojekthi yagqitywa yaze yafakwa kwimveliso ngo-Okthobha 18, 2010. Ukugqitywa kweprojekthi kuzalise umsantsa kwimveliso yentsimbi ebanzi eYunnan. Kuxelwa ukuba imveliso yokuqengqeleka eshushu kaVolody siseti yokuqala epheleleyo yokuvelisa umgca wokugaya we-steckel ozimeleyo eTshayina. Yamkela iteknoloji ehambele phambili njengokuhanjiswa okushushu kunye nokutshaja okushushu kwamatye, ubukhulu be-hydraulic, ulawulo lobubanzi oluzenzekelayo kunye nobunye ubuchwephesha obuphambili kwimveliso yeplate ekhaya nakwamanye amazwe. Ukuqengqa iimveliso ezikumgangatho ophezulu zentsimbi engenasici.
KwiShizong County Stainless Steel Industrial Park, iShizong County Wo Laidi Metal Material Co, Ltd. yenye yeenkampani ezininzi kwipaki yentsimbi engenanto engenanto, kwaye sisixhobo esinye nje kwikhonkco lesinyithi esinezixhobo.
Ngo-2020, iShizong County Wolaidi Metal Material Co., Ltd. iya kuvelisa iitoni ezingama-680,000 zeentsimbi ezahlukeneyo zentsimbi, enexabiso elivelisayo le-5 billion yuan kunye nenzuzo eyi-170 yezigidi ze-yuan. Kwangelo xesha, yazisa ngempumelelo iYunnan Jingzhong Izinto Ezintsha Co., Ltd. ngemveliso yonyaka yeetoni ezingama-200,000 zokuqengqeleka kobubanzi obumxinwa kunye neGuangdong Qianjin Industrial ukuze ityale imali kulwakhiwo lweetoni ezingama-200,000 zemveliso ebanda-kubanda iiprojekthi, kunye nokuxhasa ulwakhiwo lokucheba i-stainless steel, i-electroplating kunye neminye imigca yemveliso. Amashishini asezantsi eemveliso zensimbi engenanto kufuneka abonelele ngeentlobo ezahlukeneyo zamacwecwe esinyithi, iipayipi, njl njl, ezincedisa ikhonkco lonke lophuhliso lweshishini lesinyithi kunye nokuvula "imayile yokugqibela" ethintela uphuhliso lwensimbi engenazingcingo. icandelo lensimbi.
Ngokuphuculwa kwesinyithi seshishini lesinyithi, uSichuan Guojinrong Metal Material Co, Ltd., uSichuan Pengzhou Zhongxin Metallurgy Co., Ltd., kunye noChengming New Materials Co., Ltd. baqalise ulwakhiwo lweepleyiti kunye neeprojekthi zokuvelisa iipayipi. Okwangoku, ulwakhiwo lweeworkshops ezisemgangathweni lusondele ekugqityweni. Kulindeleke ukuba igqitywe kwaye ifakwe kwimveliso ngoJuni 2021.